“ အသုံးပြုသူလက်စွဲ” (The Economist) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှု
“ အသုံးပြုသူလက်စွဲ” (The Economist)
ဤဆောင်းပါးသည်သုတေသနပြုမှုများစွာကိုကိုးကားထားသော်လည်းလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်လိင်နှင့် fetish အရသာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုစာရေးသူမှအသိအမှတ်ပြုဖွယ်ရှိသည်။
အပေါများနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် hardcore: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာနှင့်လူငယ် '' စိတ်ကိုအဘယ်သို့လုပ်နေသလဲ?
2003 ပတေရုသ Morley-Souter, အဘယ်သူ၏ဝါသနာအရမိမိနှမနှင်းဆီနှင့်အတူကာတွန်း strips တွေဆွဲခဲ့သည်ဗြိတိသျှဆယ်ကျော်သက် IN, မိတ်ဆွေတစ်ဦးအသုံးပြုပုံခြောက်နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးနှင့်သူ၏ကျပ်ကျားအကြောင်းချွတ်, "ကယ်လ်ဗင်နှင့် Hobbes" ၏တစ်ပျက်လုံးများကိုစေလွှတ်ခဲ့သည် ။ ဒါဟာ titular pair တစုံကယ်လ်ဗင်၏မိခင်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံပြသခဲ့သည်။ ထိုသို့ porn ရှိပါသည်: "34 အုပ်ချုပ် captioned သူသည်မိမိမျက်နှာပြင်မှာငေးကြည့်သကဲ့သို့မိမိဒုက္ခဆင်းရဲစကားရပ်ဖြင့်ကာတွန်း (ပြမပါ): မစ္စတာ Morley-Souter သည်သူ၏တုံ့ပြန်မှုအွန်လိုင်းတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်။ "
အဲဒီအချိန်တုန်းကစည်းမျဉ်း 34 သည့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများလျင်မြန်စွာအပေါ်ဖမ်းမိကြောင်းအွန်လိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့ smut ၏အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုအလုံအလောက်အမှန်တရားကျင်းပတစ်ခုသော်လည်းတစ်ဦးချဲ့ကားသလိုပဲ။ အခုတော့အဖြစ်မှန်ဖို့တော်တော်နီးစပ်ပုံရသည်။ စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသော "ပြွန်" ပေါ်တွင်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုကနေသူတို့ရဲ့ငွေရှာအိမ်ရှင်အခမဲ့အပျော်တမ်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာသည်အဆိုတော် '' attribute တွေ, ပြုမူသောအမှုသရုပ်ဖော်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်အသုံးအနှုန်းများရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်ရှာဖွေကြော်ငြာ-ဖြစ်ကြောင်း -aggregators featured ။ kink သို့မဟုတ် "squick" (တစ်ဦး "icky" kink) အဘယ်သူမျှမအရွယ်ရောက်ပြီးသူ-ကလေး zoophilia ဖို့စိတျသဘောဆကနေ, ကိုယ်ပိုင် website ကိုရှိသည်ဖို့လည်းထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
"ရိပ်သာလမ်းမေး" တစ် Broadway မှဂီတကနေသီချင်းတစ်ပုဒ်၏သီချင်းစာသားက-အခြားထားအဖြစ်အမှန်တရားတစ်ခု kernel ကိုအတူချဲ့ကား "ဟုအင်တာနက်, porn အဘို့ဖြစ်၏" ။ Ogi Ogas နှင့်စိုင်း Gaddam နှစ်ခုအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် porn ထံအပ်နှံနှင့်မည်သို့မကြာခဏကြောင့်ပစ္စည်းဝင်ရောက်သည်မည်မျှဝဘ်၏ခန့်မှန်းရန်သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုတစ်ဦးစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ "တစ်ဘီလီယံဆိုး Thoughts" ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ သူတို့က Alexa, တစ်ဦးကို web-analytics ကုမ္ပဏီစာရင်းသန်းအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏, 4% ညစ်ညမ်းထံအပ်နှံဖြစ်ကြောင်းတွက်ချက်။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူများကိုရွေးချယ်ပုံများ, လွန်းခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာပြသဘယ်မှာ Tumblr သည်အဖြစ်အတော်များများကြီးတွေ Non-အထူးကုဆိုဒ်များ။
မစ္စတာ Ogas နှင့်မစ္စတာ Gaddam လည်းအားလုံး 434m ရှာဖွေမှု Dogpile သို့ဇူလိုင်လ 2009 နှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 အကြားအားလုံးအကြီးမားဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ, ကနေရလဒ်တွေကိုပြန်လာမယ့် site ကိုဝင်ကြ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နီးပါး 49m, ဒါမှမဟုတ် 11% တစ်ခုသိသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝဖြင့်ပြီးကြ၏။ 660,000 အတွက်ဖြန့်ချိသောအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေး (ISP) မှ AOL ၏ 2006 ဖောက်သည်များကရှာဖွေမှုများသုံးလ '' တန်ဖိုးရှိင်နောက်ထပ် Datasets "သူတို့ကိုအချို့သောထင်ရသောအပြစ်မဲ့အသုံးအနှုန်းများကိုပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ material- များအတွက်ရှာဖွေမှုညှို့အတွက်အားရှာဖွေခဲ့သည်ခဲ့တည်ထောင်ရန်ခွင့်ပြု ဥပမာအားကောလိပ် cheerleader "။ အဆိုပါ AOL ဖောက်သည်များ၏အကြောင်းဒသမ၏လိင်အတူတူ PornHub, အကြီးမားဆုံးစီးပွားဖြစ် porn site မှဒေတာများနှင့်တကွ, pair တစုံအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ proclivities နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောသူတို့၏သည်အခြားရှာဖွေမှုများကိုထံမှပေါ်မူတည်ပြီးနိုငျသညျ။ အမျိုးသမီးများနေ့ယောက်ျားထက် porn အပေါ်လျော့နည်းစိတ်အားထက်သန်ပုံရသည်: PornHub င်း၏ဧည့်သည်၏လေးပုံတပုံအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်ကပြောပါတယ်။ သို့သော် porn နဲ့တူလုပျသူမြားကိုအမြိုးသမီးမြားအများအားဖြင့်ယောက်ျားကဲ့သို့တူညီသောပစ္စည်းပစ္စယရှုမြင်; ပို. အမျိုးသမီးများကိုရည်ရွယ်ဆိုဒ်များထက် PornHub နှင့်တူသောသွားရောက်ကြည့်ရှု။
Palaeolithic လူသားမြားသညျဆေးထိုးခြင်းနှင့်အထွင်းဖို့ဘယ်လိုထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်အဆက်ကတည်းကအသစ်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုအတှကျအသုံးပွုထားသညျ။ အစောဆုံးဓာတ်ပုံတွေနှင့်ရုပ်ရှင်၏အချို့ disrobing သို့မဟုတ်ဝတ်လစ်စလစ်အမျိုးသမီးတွေပုံဖော်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကစျေးကိုအဆမတန်မြှခဲ့ကြသည်: အနှစ်လယ်ပိုင်း 1800s အတွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ဝက်သေံပုံနှိပ်ခြင်း၏ထွန်းခင်, တစ်ဦးအချည်းစည်းပြည်တန်ဆာ၏ဓာတ်ပုံလိင်များအတွက်သူမ၏ပါဝငျထက်ပိုပြီးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ် Hugh Hefner စတင်ခဲ့သည့်အခါ 1953, သည်အထိ Playboy Marilyn Monroe တစ်ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူညစ်ညမ်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်-ဈေးကွက်သို့သွားခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ 1980s ကဗီဒီယိုအားဖြင့်အိမ်မှာက X-rated ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ တချို့ကညစ်ညမ်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည်၎င်း၏နည်းပညာကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးရန် Sony ရဲ့ငြင်းဆန်ဖို့ Betamax ကျော်ကို VHS ၏အောင်ခြင်း attribute ။
smut များ၏ကြီးထွားနေတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားထိတ်လန့်လွှတ်။ အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများနှင့်ဘာသာရေးကွန်ဆာဗေးတစ်တစ်ဦးလက်ဝဲလက်ယာမဟာမိတ်အဖွဲ့ကလွှမ်းမိုး, 1986 အတွက်ဖက်ဒရယ်ကော်မရှင်ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးတွေ demeaned နိဂုံးချုပ်, မြီးကောင်ပေါက်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနှင့် "အမေရိကန်အများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပစ္စုပ္ပန်စိုးရိမ်ရေမှတ်" ကိုပေးအပ်သည်။ အချိန်ကျော်သွားပြီအဖြစ်ဒါပေမယ့်အဲဒီကောက်ချက် alarmist ထင်ရှား။ , အမြိုးသမီးမြားရဲ့ status ကိုထမုဒိမ်းမှုနှုန်း, ပြည်တွင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာကဖြတ်ပြီးကျဆင်းခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိပိုပြီးလစ်ဘရယ်ညစ်ညမ်းဥပဒေများ၏အချိန်ကိုက်အတွက်မူကွဲအမြတ်ထုတ်အများအပြားလေ့လာမှုများညစ်ညမ်း၏ သာ. ကွီးမွတျရရှိနိုင်မှုပင်ကျဆင်းအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားကြနိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။
ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်း 34 နှင့် "ရိပ်သာလမ်းမေး" အကြံပြုအဖြစ်, porn ယခု girly mags နှင့်အသားအရေတောက်၏နယ်နိမိတ်လွတ်သွားကြပြီ။ အဆိုပါရလဒ်သစ်တစ်ခု porn ထိတ်လန့်သည်။ ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပျော်တမ်းဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်အခမဲ့ပစ္စည်း (တွေ့မြင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အစဉ်အဆက်ကိုပိုမိုလွန်ကဲသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ရန်စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းဦးဆောင်ထားပါတယ် ဆောင်းပါး) ။ အတော်များများက porn sites များကသူတို့ကိုပြဋ္ဌာန်းရန်နိုင်ခြင်း Ultra-အကြမ်းဖက်များနှင့် scatological ပုံရိပ်တွေဆန့်ကျင်အသက်အရွယ် ratings နှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်းထွက်ခွာ, ရုရှားနှင့်အခြားဥပဒေမဲ့အရပ်တွင်တည်ခင်းဧည်နေကြသည်။ အိတ်ဆောင် devices တွေကိုတစ်ဦးအိပ်ခန်း-သို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်သို့မဟုတ်ကစားကွင်းအတွင်းတွေရဲ့ privacy အတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူစေပါသည်။ Tech မှစိတ်ဆယ်ကျော်သက်အလွယ်တကူ VPN (virtual private network) ၏အကူအညီဖြင့်အကြောင်းအရာ filter များကိုရှောင်ကွင်းနိုင်ပါတယ်။
တချို့က Anti-porn စည်းရုံးလှုပ်ရှားဟောင်းအငြင်းပွားမှုများ reprise: မကြာသေးမီကအွန်လိုင်း porn တခုတခုအပေါ်မှာ (unworkable) တားမြစ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့အိုက်စလန်၌လှုပ်ရှားတက်ကြွသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု, ကလေးများအန္တရာယ်နှင့်အမျိုးသမီး၏ပျက်စီးခြင်းနှင့်အတူသညျဟုထငျလင့်များထောက်ပြသည်။ အခြားသူများကသျောလတ်ဆတ်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုးကား။ အဆိုပါ NoFap Reddit ဖိုရမ် ( "fapping" masturbating များအတွက်ဘန်းစကားဖြစ်ပါတယ်) တွင်, မှတ်ချက်များအခြားသူများကငျြ့ဝတျကန့်ကွက်သို့မဟုတ်အလားအလာပျက်ဆီးမဟုတ်ကိုးကား, ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှုသူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်သက်ရောက်မှု။ အင်္ဂါအများရှိသူတို့အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကတည်းကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူတို့ကစွဲဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ တချို့ကကမပါဘဲသူတို့မရှိတော့တစ်ခုစိုက်ထူ get သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဟုဆိုကြသည်။
အဆိုပါ sharpest စိုးရိမ်မှုတွေရှည်လျားလိင်တက်ကြွဖြစ်လာမတိုင်မီညစ်ညမ်းတဲ့ကျယ်ပြန့်ငွေပမာဏကိုကြည့်ဖို့ယခုဖွယ်ရှိဆယ်ကျော်သက်, မဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကဘယ်လောက်လက်တွေ့နားလည်ရန်ပျက်ကွက်ကြမည်နည်း အဆိုပါ pneumatic အမျိုးသမီးကြယ်များနှင့်၎င်းတို့၏ကြည့်ရှုသူများ၏ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေနဲ့ Self-တန်ဖိုးထားဖို့လုပ်နေတာအမြဲအဆင်သင့်, freakishly စုံအထီးသူတွေကိုဘာတွေလဲ? Meg Kaplan, လိင်ပြစ်မှုများ၏ပြစ်မှုထင်ရှားသူတွေကိုဆက်ဆံသူကိုကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာရှင်အပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူအခြို့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအပျိုဖော်ဝင်န်းကျင်ကိုဖွဲ့စည်းကြသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါကမနှစ်မြို့ဖွယ်သို့မဟုတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းမှနေမကောင်း-အချိန်ကုန်ဆုံးထိတွေ့နေတဲ့ရာသက်ပန်ပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။
လေးနက်တဲ့စိုးရိမ်မှုများတစ်ဦးကကြီးမားလူမှုရေးပြောင်းကုန်ပြီ: သင်ကအရည်အသွေးမြင့်, ကောင်းကောင်းရန်ပုံငွေသုတေသနတစ်ခုပြိုလဲဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ကြလိမ့်မည်ဟုထင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျမှားပါလိမ့်မယ်။ 2013 ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလန်အတွက်ကလေးများကော်မရှင်နာမင်းကြီးရုံးလူငယ်များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ချိန်ခွင်လျှာတွင်ပြုလုပ်နိဂုံးချုပ်, ညစ်ညမ်းလိင်အကြောင်းကိုလက်တွေ့မယုံကြည်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်အနုတ်နည်းလမ်းကသူတို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် 2,304 စာတမ်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ခေါင်းစဉ်နှင့် abstraction ကိုအသုံးပြုပေမယ့်ဖတ်နေမှာသူတို့ကို 276 ပေမယ့်အားလုံးစွန့်ပစ်။ ကိုယ်ကသာ 79 အရည်အသွေးမြင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
သုတေသနဒကာဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်အခြားနေရာများတွင်မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမထိဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြသည်တစ်ယောက်တည်း porn ကြကုန်အံ့။ ကနျြးမာရေး၏အမေရိက၏အမျိုးသား Institute (NIH) မှာ Program ကိုအရာရှိတွေရန်ပုံငွေတောင်းဆိုမှုများအတွက်စကားလုံး "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ" ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့လျှောက်ထားအကြံပေး, နီကိုးလ် Prause, UCLA ရဲ့-ပင်ခေါင်းစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအခါမှာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောပါတယ်။ NIH ရန်ပုံငွေနှင့်အတူဝယ်ယူခြင်းမရှိပါကွန်ပျူတာလိင်သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုသွားကြဖို့ထင်နေကြသည်ကိုဘယ်လို၏မေးခွန်းကိုပြုစုပျိုးထောင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ဇာတ်ကားတွေင်နိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Kaplan သူမငယ်ရွယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူလေ့လာဖို့မဆိုအရင်းအမြစ်မှရန်ပုံငွေရရှိရန်နှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်နေလျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာသို့တောင်မှသုတေသနချို့တဲ့သော, သူမညည်းတွား။ အမှုအရာကမှားသွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်နားလည်မှုကဘာလဲမျှော်လင့်ချက်ရှိပါသလော
porn များ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုထိုကဲ့သို့သောကားတစ်စီး Chase သို့မဟုတ်အားကစားကဲ့သို့သောအခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပစ္စည်းပစ္စယ, စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူ, လူတွေတစ်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အစုဖို့ကပြသနိုင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ရပ်များနှင့်စိတ်နေသဘောထားများတွင်နောက်ဆက်တွဲကွဲပြားခြားနားမှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ 1986 ခုနှစ်တွင် UCLA ၏ Neil Malamuth အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုသရုပ်ပြရန်ဤချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုဖြစ်ကောင်းသာပြီးသားသူတို့ကိုကျင်းပသူကိုလူတို့သညျမှာသူတို့ကို-သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်, misogynistic သဘောထားတွေခိုင်မာစေ၏။ သို့သော် ထိုအချိန်မှစ. , ကျင့်ဝတ်ကော်မတီများထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများအပေါ်ဖြိုခွင်းပါပြီ။ ပင်တဦးတည်းမုဒိမ်းမှုတရားခံတစ်ဦးကပေးအပ် porn အပေါ်သူ၏ရာဇဝတ်မှုအပြစ်တင်ဖို့ဖြစ်လျှင်သုတေသီ-သို့သော်မတရား-ကဘဏ္ဍာရေးနှင့်လူထုဆက်ဆံရေးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းအများစုလေ့လာမှုများအဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်လူပေါင်းသူတို့စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏သည်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများပြောပါဘယ်လောက်အကြားဆက်စပ်မှုကိုတည်ထောင်ထက်သွားပါ။ အမျိုးမျိုးသောသုတေသီများ porn အသုံးပြုမှုကြားဆက်ဆံရေးအခက်အခဲများ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အခြားသောလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူသူတွေထဲမှာမြင့်မားအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်သောက်သုံးနှင့်လိင်သို့အခြားသူများကိုအကြပ်ကိုင်လာဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီတူတစ်ဦးမျှသာဇီဝကမ္မ function ကိုအဖြစ်လိင်မှတ်ပါ, အစောပိုင်းလိင်တက်ကြွဖြစ်လာကြပါပြီဖို့ပိုများပါတယ်။ အဆိုပါ porn သို့မဟုတ်ပြဿနာကို: ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမပထမဦးဆုံးလာသောသိတယ်။
လူငယ်များလေ့လာဖို့အထူးသဖြင့်ခက်ခဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်အောက်အရွယ်မှညစ်ညမ်းဖေါ်ပြသည်သုတေသီများ Self-အစီရင်ခံအပေါ်အားကိုးရမည်ဟုအဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးသောနေရာများအတွက်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်ခဲဘာမှစေတစ်ဦးတည်းကိုသူတို့အပေါ်မကျေနပ်ကြပါဘူးနေကြသည်ကိုသိသောရှက်စရာအလေ့အထအကြောင်းကိုလူကြီးများမှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြောဆိုပါ။ နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. သာတောင်းဆိုနေတာ porn သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြည့်ရှုအားပေးမလာကြပေမယ့်အတန်းဖော်များထံမှအကြောင်းကြားရပြီတဲ့သူတွေကိုလွဲချော်။ ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့ 2010 နှစ်အရွယ်မှ 14- ၏ 9% ယခင်တစ်နှစ်ကာလအတွင်း porn မြင်ခဲ့ပြီးသောတွေ့ရှိခဲ့ရသော 16 တစ်ဦးဒယ်အိုး-ဥရောပတစ်ဦးအဖြစ်စစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များကို, အထင်သေးဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အဲဒီစစ်တမ်းကိုလည်းလက်လှမ်းဖို့အများကြီးပိုလွယ် porn နှင့်အခမဲ့ပစ္စည်းအတွက်ပေါက်ကွဲတိုးစေပြီဖြစ်သောစမတ်ဖုန်းနှင့် iPad, predated ။ သူတို့ပထမဦးဆုံး porn ကိုမြင်သောအခါအခြားအသုတေသီများတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပေမယ့်တိကျမှုပြန်လည်သိမ်းဆည်းအပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့်ရလဒ်နေ့စွဲထဲကဖြစ်အာမခံနေကြသည်။
အများဆုံးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခိုင်အမာတစ်ခုမှာအသုံးပြုသူများသည်အခြားသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတူညီသောလမ်းအတွက်ညစ်ညမ်းအပေါ်မှီခိုဖွစျလာနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ မတ်လ ChildLine နှင့် NSPCC နှစ်ခုကြီးတွေသားသမီးရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် 12 နှစ်အရွယ်ဆယ်ဗြိတိန် 13- အတွက်တဦးတည်းကိုသူတို့ "porn စွဲ" ခဲ့ကြသည်ကြောက်ရွံဟုဆိုကာစစ်တမ်းတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခင်ကပိုကောင်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်-အဆောက်အဦလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်လူသိများနေတဲ့စျေးကွက်-သုတေသနကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ပညာရှင်များနှင့်လိင်ပညာပေးများစွာက "အမှန်တကယ်အန္တရာယ်များ၏ညွှန်ပြမဟုတ်ဘဲအချို့သောလူငယ်များညစ်ညမ်းသူတို့ကိုထိခိုက်ကြောင်း၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားကိုထောက်ပံ့ပေး" မဟုတ်ခဲ့ဟုထားတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ပိုကောင်းတဲ့သက်သေအထောက်အထား porn စွဲ, ကတည်ရှိနေလျှင်, အလွန်ရှားပါးသောကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က Valerie Voon သူ၏အသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းသူတို့ကိုအလေးအနက်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း 23 ယောက်ျားကိုလေ့လာ: အချို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကြည့်ထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏အလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဆုံးရှုံးခဲ့နှင့်အခြားသူများ porn sites များပေါ်ကြီးမားခု၏သုံးစွဲခဲ့သောဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ခြင်းပြောသည် ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲစိုက်ထူ။ သူတို့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်၏စကင်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုကြည့်မူးယစ်ဆေး-takers ၏ပုံမှန်ပုံစံများပြသခဲ့သည်။ တချို့ကစွဲနေတဲ့ဂန္နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြသ: ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းရှိနေသော်လည်းသူတို့ကခံစားရန်မရှိတော့သလိုပဲ။ "အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု" ၏အခြားလေ့လာမှုမှာသူတို့ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ-လည်းစွဲ၏ပုံမှန်မှလျင်မြန်စွာသညျ့တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူပုံစံများထိန်းချုပ်မှုအတွက်မမွငျခဲ့သညျ။ ဒါပေမယ့်ပင်ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်နစ်နာအုပ်စုတစ်စုအတွင်း, ဒေါက်တာ Voon ဦးနှောက်အပေါ်တုံ့ပြန်သည့်ကျယ်ပြန့်အပြောင်းအလဲကိုမြင်တော်မူ၏။
မစ္စ Prause လည်းသိပ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်တဲ့သူယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေခဲ့သည်။ သူမသည်နံပါတ်နှင့်ပြင်းထန်မှုသူတို့အစီရင်ခံပြဿနာများနှင့်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှု၏ "မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့" သဘာဝအကြားမျှဆက်သွယ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ဆာဗေးတစ်သဘောထားတွေတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘာသာရေးမိသားစုနောက်ခံညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်သောအချက်များဖြစ်နိုင်သည်ဟုသူမကဆိုသည်။ "porn နှင့်အတူလူတွေသူတို့ပဲကကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါသူတို့စွဲနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ "
"Clients တွေအနေနဲ့ငါဖြစ်၏ထက်ပို alarmist နေကြတယ်" ဟုမှ Ian Kerner တစ်လိင်ကုထုံးနှင့် ": အပျြောအပါးမှအဆိုပါအတွေးအခေါ်က Man ရဲ့လမ်းညွှန်တစ်ဦးအမျိုးသမီးသူမသည်ပထမဦးစွာလာ" ၏စာရေးဆရာကပြောပါတယ်။ အတော်များများက, အွန်လိုင်း porn အများကြီးရှုမြင်အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့် erectile သို့မဟုတ် orgasm အခက်အခဲများသတင်းပို့, သူတို့ပစ္စည်းပစ္စယစွဲဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။ သို့သော်မကြာခဏသူတို့ရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲရိုးရိုးဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Kerner ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်များအတွက်အွန်လိုင်း porn ရှောင် erectile ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူတစ်ဒါဇင် clients များမေးတယ်။ သူတို့ဟာဒီထက် masturbated: က, အကူအညီမပေးဘဲ fantasize ဒီဗီဒီပေါ်တွင်တင်သို့မဟုတ်တစ်မဂ္ဂဇင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါသိပ်အလုပ်ခေါ်သွားတယ်။ အများအပြားက၎င်းတို့၏လိင်စိတ်ပြန်လာသောကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးညစ်ညမ်းအလေ့အထများ၏အသုံးအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဂျက်ဖရီ Miller ကနယူးမက္ကဆီကိုတက္ကသိုလ်စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကပြောပါတယ်, တစ်နည်းနည်းလျော့နည်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုရန်စိတ်သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့ခေါ်ဆိုသူများက "အိမ်ထောင်ဖက် Grounds သို့" sex အကြောင်းကသူ့ Podcast တခုကိုဆက်ဆံရေးနှင့်အခြားအများကြီးထဲကရွေးချယ်ကြသူလူပျိုတို့ဖြစ်ကြသည်မှ: နိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအလုပ်အကိုင်များအတွက်အလုပ်လုပ်အိုးတွေအများကြီးဆေးလိပ်နှင့်ညစ်ညမ်းတဲ့အကြီးအသဘောတူညီမှုကိုကြည့်။ သူတို့ကပတ်ပတ်လည်မှာသူတို့ဘဝကိုဖွင့်ကာရည်းစားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးကြည့်ပါ။ မစ္စတာ Miller က "သူတို့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုတနျဖိုးတိုးပွါးလာ" အားလုံးအရာအချို့ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပိုကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့စတင်များနှင့်သတိသမ္လေ့ကျင့်ခန်းမှတိုးတက်နှင့်အထွေထွေအသိပညာပေါ်တက်နိန်, အကြံပြုသည်။ အစစ်အမှန်အပျော်အပါးများအတွက်လွယ်ကူသောအစားထိုးမိမိတို့၏ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသူကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပိုမိုလွယ်ကူတစ်မြိုင်ထဲမှာဖမ်းနေဖို့စေပါဘူး။
တချို့က vanilla ခနှင့်အတူစတင်သူကိုအွန်လိုင်း porn နှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုပိုပြီးoutréပစ္စည်းပစ္စယမှတစျဆငျ့ကိုကလစ်နှိပ်ပါကတစ်အရသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ကိုစိုးရိမ်နေကြသည်။ ဤပဋိသန္ဓေ ယူ. , ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ '' အရသာတော်တော်လေးသတ်မှတ်ထားတဲ့-နှင့်အတော်လေးသာမန်ဖြစ်ပုံရသည်။ မစ္စတာ Ogas နှင့်မစ္စတာ Gaddam ညစ်ညမ်းရှာဖွေသူတို့၏အမျိုးအပါဆုံးပဲတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုတည်ငြိမ်အကျိုးစီးပွား (ဒါပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်, အဆိုတော် '' ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်) ရှိသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ AOL ဒေတာများကဖုံးလွှမ်းသုံးလအတွင်းမှာတော့ porn ကိုရှာဖွေသောသူတို့၏အမျိုးအ 56% ပဲတဦးတည်းကဏ္ဍဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမျိုးအစားပျမ်းမျှအရေအတွက်ကနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထက်နည်း 1% တစ်ဆယ်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ထိပ်လေးအမျိုးအစားလူငယ်, ရင်သား, ယောနိနဲ့တင်ပါးနှင့်သက်ဆိုင်သောစကားများခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးလိင်ကွဲယောက်ျားကိုအတွက် Model အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု "busty ဆယ်ကျော်သက်" သို့မဟုတ်တစ်မူကွဲဖြစ်ပါသည်, မစ္စတာ Ogas ကပြောပါတယ်။ "ယောက်ျားကြီးတွေရင်သားရှာဖွေနေစတင် bestiality အထိအလုပ်လုပ်ကြဘူး။ "
အဲဒီအဖြစ်ဝေးကဝင်အဖြစ်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းပါသည်ကြည့်ရှု '' အရသာမပြောင်းပါဘူးလျှင်ပင်, ကအိပ်ခန်းလောကဝတ်ထိခိုက်ခံရနိုင်မည်နည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေနေတဲ့လေ့လာမှုမှာ, လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတွေက porn စအိုလိင်ဆက်ဆံရန်လူငယ်များရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားရှိမရှိရှာရှာကြံလျက်နေ၏။ သူတို့ဟာ 130 နှစ်အရွယ်, အုပ်စုများအတွက်အချို့နှင့်အချို့သောတစ်ဦးတည်းမှ 16 18- မေးမြန်းထားသည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းသူတို့ "uptight" သို့မဟုတ် "နုံ" ခဲ့ကြသည်ကိုအနည်းဆုံးမှန်လျှင်, မိန်းမတို့အဘို့ယောက်ျားအဘို့အပျြောမှေ့စပေမယ့်နာကျင်ဖြစ်ဖို့ကအဖြစ်ဖွယ်ရှိမှတ်။ လုလင်အတော်များများသဘောတူညီခကျြမှနှိပ်မိန်းကလေးဖော်ပြထား; အမျိုးသမီးငယ်သူတို့ပင်ထပ်ခါတလဲလဲငြင်းဆိုပြီးနောက်, တခါတရံတွင်အခိုငျအမာမေးခံရဖို့ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်း "လုပ်" လူစအိုလိင်ဆက်ဆံ-တစ်ဦးရှင်းပြချက် Cicely Marston, သုတေသီတဦးချင်သော, "မှာအကောင်းဆုံး, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း" အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဆိုပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဝါကြွားဖို့အများကြီးလူပျိုတို့ဖွငျ့ evinced ဆန္ဒကအနည်းဆုံးအဖြစ်သြဇာဖြစ်သလိုပဲ။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်လိင်သူတို့ရဲ့နားလည်မှုအတွက်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသီများသူတို့သိရှိသမျှကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အမည်ကိုမှသူတို့ကိုမေးတယ်။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့သော threesomes နှင့်ဂိုဏ်း Bang အဖြစ်အများအပြား porn tropes, စာရင်းနှင့်အချို့သော scatological နှင့်အလွန်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအထူးသဖြင့်ကလစ်များနှင့်ရုပ်ရှင်အားဖြင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
longitudinal လေ့လာမှုများမရှိဘဲ, သော်လည်း, က porn အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားဖြစ်စေ, အဲဒီမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ပြောင်းကုန်ပြီခဲ့, ဒါကြောင့်ပါလျှင်ထားပါတယ်ရှိမရှိသိရန်ခဲယဉ်းသည်။ Cindy ကဆုန်ပေါက်ပြေးတစ်ဦးကြော်ငြာခြင်းအလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်, ထိုးထွင်းသိမြင်ပေးထားပါတယ်။ 2003 များတွင်အသက် 43 သူမကအွန်လိုင်းမှ-ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီရဲ့အကောင့် pitching ခဲ့သည်။ စျေးကွက်လေ့လာဖို့, သူမက၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အများအပြားအတူတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ရေမြုပ်သူတို့ရဲ့ 20s အတွက်ယောက်ျားကနေ E ကို-mail ။
မစ္စကဆုန်ပေါက်ပြေးလည်းမညှို့လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကတည်းကသူမနှင့်နီးစပ်သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ More တက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အမြည်းရန်အနေအထားအတွက်သူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2009 ခုနှစ်တွင်သူမလိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညူးသောအမည်များကိုအမြိုးသမီးမြားကိုချေါလှည့်ဖို့သေချာ-မီးလမ်းကြောင်းကိုထိုကဲ့သို့သောအယူအဆကိုအဖြစ်လုလင်တို့သည်တို့တွင်ဘုံငွေကြေးဖြစ်လာကြသလိုပဲကြောင်းတစ်ဆယ် "ညစ်ညမ်းကမ္ဘာမှဒဏ္ဍာရီ" debunk မှတစ်ဦးဝက်ဘ်ဆိုက်, makelovenotporn.com created သူတို့အပျေါမှာ။ သူမကသူမ၏အတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်. ပေး၏ကို TED စကားပြောရန်တစ်ဦးကလေးမိနစ်အများဆုံးဆွေးနွေးတင်ပြအဲဒီနှစ်ဦးတည်းကြီးနှင့်နောက်ပိုင်းပိုသန်းကြိမ်ထက် YouTube ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။
မစ္စကဆုန်ပေါက်ပြေးနေဆဲလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ e-mail ကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကအမျိုးသမီးငယ်လည်းညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ပုံဖော်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှိခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Young ကစုံတွဲကိုသူတို့မသူတို့တစ်ဦးချင်းစီသည်အခြားသူတို့ကိုမျှော်မှန်းထားသည်ထင်သာရှိသောကြောင့်အိပ်ရာအတွက်လုပ်နေတာခဲ့သောအရာတို့ကိုခံစားခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရသောစကားတစ်စင်းအားများအတွက်သူမ၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူမသည်ကတည်းက makelovenotporn.tv, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင် "လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်လူမှုရေးအရ shareable" အောင်ရည်ရွယ်ဗွီဒီယိုတစ်ခု-sharing ဆိုက် created, သူရန်ပုံငွေရှာဖွေနိုင်သည်မှန်လျှင်, လိင်-ပညာရေးပစ္စည်းများများအတွက်အခြားထူထောင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
တချို့ကကဆည်တည်ဆောက်မှုကိုဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်း porn ၏ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှတုံ့ပြန်နေကြသည်။ 2013 ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အစိုးရထဲမှာသူတို့ filter များပိတ်ထားမဟုတ်လျှင်သစ်ကိုဖောက်သည် '' ကွန်ပျူတာများကနေအရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ဖို့ ISP များအားအတင်းအကျပ်။ အများဆုံးဖောက်သည်ပြုကတည်းကအစိုးရကယခုဖြစ်ကောင်းရွေးကောက်ပွဲလိပ်သို့မဟုတ်အကြွေး-ရည်ညွှန်းအေဂျင်စီများနှင့်အတူတစ် anonymised ID ကိုစစ်ဆေးမှုများကနေတဆင့်သူတို့ 18 ကျော်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့အသုံးပြုသူများကိုအတင်းမအရွယ်ရောက်ပြီးသူဝက်ဘ်ဆိုက်များပိတ်ပစ်ရန်စီစဉ်နေသည်။ အများဆုံး porn sites များဗြိတိန်နိုင်ငံပြင်ပမှာအခြေစိုက်ကြသည်ကတည်းကကလိုက်လျောမ ISP များကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
အနည်းဆုံးစိစစ်မှုများမတော်တဆမြိန်ပစ္စည်းပစ္စယကိုမြင်လျှင်ထံမှကလေးများကိုရပ်တန့်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရှာကြံမည်သူမဆိုလွယ်ကူစွာတစ်ဦး VPN ကိုသူတို့နှင့်အတူရှောင်ကွင်းနိုင်ပြီး, ဥပဒေရေးရာပစ္စည်းလက်ကားပိတ်ဆို့ခြင်းအခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားအသွားအလာတဦးစီကိုကုသရာမှ ISP များအားတားမြစ်ကြောင်းဥရောပစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖျက်လိမ့်မည်။ လိင်ပညာရေး 1970 ကတည်းကမသင်မနေရခဲ့ဘယ်မှာဒိန်းမတ်, ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းယူသည်။ အဲဒီအစား porn တည်ရှိ, သို့မဟုတ်ပါကမြင်နေထံမှလူငယ်များကိုရပ်တန့်မပါဘူးဟန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေထက်, အခြို့ဒိန်းမတ်ဆရာ, ဆရာမစာသင်ခန်းထဲမှာဆှေးနှေးဖို့စတင်နေကြသည်။ "ဒါဟာ porn မှကျောင်းသားမိတ်ဆက်တဲ့မေးခှနျးကိုမရင့်," ခရစ်ယာန် Graugaard, တစ်နိုင်ငံလုံးသွားကြဖို့ထိုကဲ့သို့သောသင်ခန်းစာများချင်ပါတယ်တဲ့သူ Aalborg တက္ကသိုလ်မှ sexology တစ်ဦးပါမောက္ခကပြောပါတယ်။ "မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများနှစ်ဦးစလုံး၏အများစုဟာပြီးသားသူတို့ရဲ့အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များတွင်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များကြုံတွေ့ပြီ။ " Porn ကျားမတန်းတူရေး, လုံခြုံလိင်နှင့်သဘောတူညီချက်၏အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပြီးသူကပြောပါတယ်-နှင့်ပျော်ရွှင်လိင်ဘဝကိုရှိသည်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း အနာဂတ်မှာ။ porn အားလုံးသူတို့ကိုန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသူစဉ်းစားတွေးခေါ် "ကနုပျိုသောလူအရေးပါစားသုံးသူဖြစ်တတ်ရန်သင်ယူအရေးကြီးပါတယ်။ "